संसार छोड्नु अघि आफ्नी आमालाई हात हल्लाएको फोटो वर्षकै उत्कृष्ट घो’षित ! – Life Nepali
संसार छोड्नु अघि आफ्नी आमालाई हात हल्लाएको फोटो वर्षकै उत्कृष्ट घो’षित !
काठमाडौं । आइएमई-ग्लोबल-आइएमई बैंक नेपाल फोटो प्रतियोगिता २०७६ को उपाधि नभेष चित्रकारले जितेका छन्। हा’इड्रोसेफालुस रो’गका कारण अ’कालमै मृ’त्युवरण गरेका बरियारपुर रौतहटका दुई वर्षीय बालक बजरंगी मिश्रले आफ्नी आमालाई मृ’त्यु पहिले हात हल्लाउँदै गरेको फोटो यो वर्षको आइएमई-ग्लोबल-आइएमई बैंक फोटो अफ द इयर घो’षित भएको हो। चित्रकारले आइएमई-ग्लोबल-आइएमई बैंक नेपाल फोटो प्रतियोगिता २०७६ को उपाधिसँगै अन्य दुई विधामा प्रथम र एउटा विधामा तेस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन्।
यसैगरी सुरज श्रेष्ठको फोटोले शिखर इन्स्योरेन्स नेपाल स्माइल विधा जि’त्यो भने सेलपे डेली लाइफ विधामा गोपेन राईले बा’जी मा’रे। त्यस्तै दिपेन श्रेष्ठले अर्घाखाँची सिमेन्ट न्युज विधाको उपाधि उचालेका छन। सिटी एक्सप्रेस कल्चर एन्ड टुरिजममा सुबिर थापाले बा’जी मा’रे भने डिसहोम स्पोर्टस विधाको उपाधि विकास द्वारेले जि’ते। त्यसैगरी नेप्टोस फोटो स्टोरीमा नभेष चित्रकारको फोटो प्रथम भयो। सेलपे डेली लाइफमा रोविक उपाध्यायको फोटो दोस्रो तथा सुरज ताम्राकारको फोटो तेस्रो भयो। अर्घाखाँची सिमेन्ट न्युज विधामा एलिट जोशीको फोटो दोस्रो तथा केशव थापा तेस्रो भए ।
नेचर एन्ड वाइल्ड लाइफमा दिपेन श्रेष्ठको फोटो दोस्रा बन्दा दिपक बुढाथोकीको फोटो तेस्रो भयो। सिटी एक्सप्रेस ‘कल्चर एन्ड टुरिजममा प्रमिन मानन्धरको फोटो उपविजेता तथा रोविक उपाध्यायको फोटो तेस्रो भयो। डिसहोम स्पोर्टसमा सुनिता डंगोलको फोटो दोस्रो तथा दिनेस गोलेको फोटो तेस्रो भयो। ‘शिखर इन्स्योरेन्स नेपाल स्माइलमा सुलभभक्त श्रेष्ठको फोटो दोस्रो तथा नभेष चित्रकारको फोटो तेस्रो भयो। त्यस्तै नेप्टोस फोटो स्टोरीमा रोविक उपाध्यायकोे फोटो दोस्रो र चन्द्रबहादुर आलेको फोटो तेस्रो भयो।
Previous साली-भीना का’ण्ड : १ रातले यहाँ सम्म पुर्‍यायो भन्दै भागेका साली-भेना भेटिए” (हेर्नुहोस् भिडियो)
Next विश्वकै अग्लाे कलश बागलुङमा निर्माण हुँदै – सेयर गरौ !